Saldhigga Cimilada ee Netatmo Hada Waa Khariidad HomeKit | Wararka IPhone
Saldhigga cimilada ee Netatmo wuxuu hadda la jaan qaadayaa HomeKit
Shirkadda soo saarta qalabka casriga ah ee Netatmo ayaa hadda ku dhawaaqday in mid ka mid ah badeecadaheeda ugu caansan, saldhigga cimilada uu ugu dambayntii hadda la jaan qaadayo Apple's HomeKit iyada oo loo marayo cusbooneysiin firmware ah oo horeyba u jirtay. waxaa heli kara dhammaan isticmaaleyaasha oo leh qaab 2016 ama ka dib.
Thanks to cusboonaysiintaan, ugu dambeyntii waan awoodnaa la falgal xarunta cimilada adoo adeegsanaya amarrada Siri. La Saldhigga cimilada ee Netatmo, oo aan horey ugu falanqeynay iPhone News Dhowr sano ka hor, waxay na tustay macluumaad ku saabsan huurka gudaha iyo dibedda, heerkulka, heerka CO2 ee guriga, iyo tayada hawada.
Intaa waxaa dheer, waan awoodnaa iibso modules dheeraad ah si loo ballaariyo macluumaadka naloo siiyo qaybaha kale ee gurigeenna. Iyadoo la sii daayo macruufka 13, dhammaan macluumaadka ay soo bandhigtay aaladda waxaa lagu soo bandhigayaa hab kooxaysan. Si kastaba ha noqotee, cusbooneysiinta soo socota ee iOS, macruufka 13.2, dhammaan macluumaadka ay nuucyadan dareemayaasha ahi muujinayaan annaga ayaa loo soo bandhigi doonaa si madax bannaan
Thanks to cusbooneysiintan, waan awoodnaa weydii Siri heerkulka waxa ay ku sameyso qolka canugga, qoyaanka banaanka ... Iswaafajintaan waxay sidoo kale gaarsiineysaa otomaatiyada, otomaatiyada aan ku dhaqaajin karno iyadoo ku saleysan isbeddelada CO2 ama tayada hawada, sida ay duubeen dareemayaasha xarunta cimilada.
Xaddidnaanta borotokoolka HomeKit awgeed, qaar ka mid ah astaamaha Saldhigga Cimilada ee Netatmo lagama heli karo barnaamijka Apple, sidaa darteed waa inaan sii wadnaa isticmaalkeeda si aan u ogaanno heerarka buuqa, cadaadiska jawiga, dabaysha iyo roobka. In kasta oo aysan la jaan qaadi karin HomeKit xilligan, Netatmo wuxuu xaqiijinayaa in lagu dari doono sida HomeKit u oggolaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Saldhigga cimilada ee Netatmo wuxuu hadda la jaan qaadayaa HomeKit
Podcast 11x09: Iyo Nuxurka Goorma
Apple wuxuu u dabaaldegayaa bandhigga taxanaha cusub ee Jason Momoa ee Apple TV +